Amine yamabanga aphantsi
Umsebenzi weAmine kunye neAmide
Amanqatha eacid chloride
I-Dodecyl trimethyl ammonium chloride
I-Octadecyl trimethyl ammonium chloride
IDiotyl Dimethyl Ammonium Chloride
I-Di (Octldecyl) iDimethyl Ammonium Chloride
I-Octyl dimethyl amine ephezulu (DMA8)
I-Octyldecyl dimethylamines (DMA810)
ICocoalkyl dimethylamines (DMACO)
I-Decyl Dimethylamine (DMA10)
IDodecyl Dimethylamine (DMA12)
I-Decyl Dimethyl Amine oxide (OA-10)
ILauryl Dimethyl Amine oxide (OA-12)
I-N, N-di (hydroxyethyl) iDodecyl Amine oxide (OAE-12)
I-Teterdecyl Dimethyl Amine oxide (OA-14)
I-Hexadecyl Dimethyl Amine oxide (OA-16)
I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201
I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (2EO) / Fentacare 1202
I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (5EO)
I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (8EO)
I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (15EO)
I-N-Cocoalkyl 1,3-propanediamines (DACO)
I-N-Tallowalkyl 1,3-propanediamines (DAT)
I-N-Oleyl 1,3-propanediamine (DAO)
I-N-Dodecyl 1,3-propanediamines (DA12)
I-3-Decyloxy 1-propylamine (LPA10)
I-3-Isodecyloxy 1-propylamine (OPA10)
I-N-Methyl diethanolamine (MDEA)
I-N, N, N ', N' -tetramethyl dipropylene triamine
IDodecyl Dimethyl Betaine BS-12
I-Teterdecyl Dimethyl Betaine BS-14
I-Octadecyl Dimethyl Betaine BS-18
I-Octadecyl / Hexadecyl Dimethyl Betaine BS-1816
ICocoamidopropyl Betaine CAB
Amanqatha e-Acid Chloride (0812)
Amanqatha e-Acid Chloride (0816)
Amanqatha eAcid Chloride (1214)
Amanqatha eAcid Chloride (1218)
Iinkalo zesicelo se-betai ...
Intshayelelo kwi-Basic Knowl ...
Ukusetyenziswa kweSurfactant i ...
Iimpawu ezisisiseko zoku ...
Imisebenzi esithoba yecationic ...
IFEKSI: + 86-531-8235 0881
Yongeza: 1711 #, Isakhiwo 6, Lingyu, Guihe Jinjie, Luneng Lingxiu City, Shizhong District, Jinan City, China
Iimpawu ezisisiseko zamandla e-amine oxide
1. Ukunyibilika kwamanzi
Kuba kukho isibophelelo se-polar N → 0 kwimolekyuli ye-amine oxide, kwaye umzuzu wedipole ngu-4.38D, ikhompawundi ineempawu zokuphakama okuphezulu kunye nendawo yokunyibilika okuphezulu. Iyanyibilika ngokulula kwizinyibilikisi polar ezinjengamanzi kunye neziselo ezinxilisayo ezisezantsi, kodwa kunzima ukuzinyibilikisa kwizinyibilikisi ezingezizo polar ezifana neoyile yamaminerali kunye ne-benzene.
Kwisisombululo esinamanzi, i-amine oxide ikhona kwisixa esikhulu ngohlobo lwehydrate (R1R2R3NO · XH2O), kodwa ngokutshintsha kwexabiso le-pH, ubumbano buya kutshintsha. Umzekelo, kwisisombululo se-alkaline nge-pH> 7, ubukhulu becala i-anionic surfactant. . Nangona kunjalo, kwizisombululo zeasidi kwi-pH <3, i-amine oxides ubukhulu becala ikwimo yee-cations [R1R2R3NOH] +. Isisombululo esinamanzi se-amine oxide sineempawu ezinobuthathaka, kwaye sisetyenziswa kwizithambiso ukwenza ulusu lube mhlophe.
2. Umsebenzi umphezulu
(1) umphezulu tension: Emva kokongeza amine oxide, uxinzelelo kumphezulu kwamanzi ziya kuncitshiswa kakhulu. Umzekelo, uxinzelelo kumphezulu wamanzi amsulwa yi-72.80 × 10-3N / m. Uxinzelelo lobuso kuxinzelelo lwe-micelle ebalulekileyo (cmc) yee-oxide ezahlukeneyo ze-amine zimalunga ne-30 × 10-3N / m. Kwi-cmc, uxinzelelo kumphezulu we-amine oxide isezantsi kakhulu kunaleyo yetyuwa ye-ammonium, ke ngoko umphezulu womsebenzi we-amine oxide ungcono kunowetyuwa ye-ammonium.
(2) Ukuyekisa ukungcola: Xa i-amine oxide ixutywe ne-AES okanye i-AS, inefuthe lokudibanisa ukungcola, kodwa xa ixutywe ne-LAS, ukusebenza kwayo akulunganga. Imveliso yokuhlamba umlomo isebenzisa i-12% ye-fatty acid (C12: C18 = 12: 1), 13% non-ionic surfactant, 12% LAS. Ukuba inani elithile le-amine oxide longezwa, umphumo wokucoca uya kuba ulunge kakhulu.
(3) Ukugxininisa amandla: Ukuqinisa amandla sisalathiso sokulinganisa umgangatho weemulsifiers. Umzekelo, emulsify isisombululo se-amine oxide yolwelo kunye nesinyibilikisi se-petroleum phantsi kweemeko ezifanayo kwi-70 ° C, emva koko ujonge utshintsho lwevolumu emva kwe-emulsification. Iziphumo zibonisa ukuba kwi-amine oxide homologs, amandla e-emulsification anda ngokunyuka kwenani lekhabhoni yeqela le-alkyl elide. Olunye uphawu lwe-amine oxide njenge-emulsifier kukuba inokumisa kuluhlu olubanzi lwexabiso le-pH, ngakumbi kwimithombo yeendaba ene-asidi, inokudibana ne-quaternary ammonium cations njengezilondolozo kunye neebactericides, ayizukuthintela ukusebenza kwe-anti-corrosion i-preservative, kwaye inokuphucula ukusebenza kwayo ngokuchasene nokubola, okungaphaya kokufikelelwa zezinye izinto ezingenziwanga ionic.
(4) Ukuzinzisa amagwebu kunye nokuzinzisa amagwebu: I-Amine oxide yinto esebenzayo yokuzinzisa amagwebu, esetyenziswa rhoqo kulwelo lokuhlamba iimpahla okanye isepha yokuhlamba izitya. Imveliso enedosi ye-1% ukuya kwi-5% inentsebenzo ethambileyo, akukho kucaphuka emehlweni, kunye nokumelana namanzi anzima. Inentsebenzo elungileyo, kwaye amagwebu aphezulu emanzini anzima nge-pH = 9, 300mg / kg. Xa i-fatty alcohol sodium sulphate (AS) ixutywe ne-amine oxide, igwebu ligcwele kwaye lizinzile, nokuba kukho igrisi, ayizukutshintsha. Ke ngoko, ihlala isetyenziswa ngokudibeneyo kunye neearhente ezisebenzayo ze-anionic ezinje nge-LAS, AS, AES, SAS, njl., Kwaye inefuthe elilungileyo lokuchasana. I-foam eveliswe yi-amine oxide inemvakalelo yokuhombisa kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiishampu kunye neemveliso zeshawari.
Xa uxinzelelo lwe-oxide ye-amine idlula uluhlu oluthile, isigaba esiphakathi kakhulu senziwe. Nokuba iqondo lobushushu lonyukile, alinakuguqulwa liye kwisigaba seselfotropic eshukumayo. Ke ngoko, xa i-amine oxide iveliswa, kuphela malunga ne-30% yesisombululo samanzi esinokufunyanwa, ekunzima ukusifumana Kwiimveliso ezinokuxinana okuphezulu, ii-anionic surfactants kufuneka zongezwe ukufumana uxinzelelo oluphezulu lweemveliso ze-ammonium oxide.
） 4） Ukuhambelana namayeza asebenzayo anionic
Ukusebenza kwe-amine oxide amphoteric surfactants kuyinto enobulali. Ii-anionic surfactants kunye ne-amine oxides zisetyenziswa kwinani elikhulu lezinto zokucoca ukucutha ukucaphukisa ii-anionic surfactants kunye nokufumana iziphumo ezizodwa. Xa uxinzelelo lwe-amine oxide lusezantsi kune-cmc, ukuxubana ne-anionic surfactants ukwenza ii-anion kunye ne-cations kuyonyusa i-pH yemvula, ebangelwa kukuthambekela kwe-amine oxide; kwi-cmc, ezi fom ezimbini zixubene ne-micelles; ephezulu kwi-cmc, i-anion eyenziweyo kunye neetyuwa zetyal ziyanyibilika kwimichelles exubeneyo.
Xa i-pH≥8, i-amine oxide ibonisa iimpawu ezingezo-ionic kwaye zinokudityaniswa kunye ne-anions; xa i-pH≤8, ukungqinelana nee-anion kuya kuvelisa indawo engabonakaliyo, kukhokelela kwimvula; xa i-pH≤6, ezi zimbini zidityaniswa ngokomlinganiso ofanelekileyo. I-amine oxide kunye ne-anionic surfactant zidibanisa ukwenza isibini se-anion-cation ukwenza isisombululo esibonakalayo. Ngeli xesha, ityuwa ye-anion-cation inyibilikisiwe kwii-micelles ezigqithileyo. Ukuba kusetyenziswa i-dimethyl amine oxide endaweni ye-dimethyl amine oxide, ukuhambelana kuya kuba ngcono; ukuba ithathe indawo ye-amine oxide equkethe amacandelo e-polyoxyethylene ether, umphumo uya kuba ngowona mhle.
(5) Ubutyhefu bendalo
I-amine oxide yinto engeyiyo inetyhefu okanye inetyhefu encinci. Isisombululo sesitokhwe esithengisayo sinesikhumba esikrwada kwimivundla, kwaye namehlo ayacaphukisa. Kwi-2% yoxinaniso, akukho caphukiso; Yondliwe yambathiswa i-alkyl dimethyl kangangeminyaka emibini. I-Amine oxide, akukho carcinogenesis ebangelwe yi-amine oxide ifunyenwe. I-biodegradability ye-amine oxide ilungile, i-88% inokuthotywa emva kweeveki ezimbini kunye ne-93% kwiiveki ezi-4. I-amine oxide ngokusisiseko ayinayo ityhefu kwaye inokucaphuka okuphantsi kakhulu kulusu namehlo. Ngokwengxelo kaKLein: I-LD50 ye-amine oxide yi-2000mg / kg ～ 6000mg / kg, ephantse yalingana ne-LD50 yetyuwa yetafile ye-4000mg / kg. Xa ixutywe nezinye izinto ezisebenzayo, i-amine oxide inezinto ezichasayo ezinokusetyenziswa kwi-shampoo yokuthintela inkwethu ukunciphisa ukucaphuka kwe-ZPT. Ukongeza, kwi-shampoos ene-asidi kunye nezisombululo ze-asidi, i-amine oxide inokunxibelelana namaqela e-carboxyl kwiinwele nakwi-engile yolusu. Ingayilungisa inwele, iyinciphise iflutter, kulula ukuyidibanisa, kwaye iphucule ukurhabaxa kolusu.
(6) Amayeza okubulala iintsholongwane
I-alkyl amine oxide inomsebenzi othile wokulwa ne-antibacterial, kodwa ayifikeleli kwiipropathi ze-bactericidal ezinamandla zetyuwa ye-ammonium. Nangona kunjalo, iimveliso zefomula eziqukethe i-amine oxide zineempawu zazo zokubulala, ezinokuthintela ukukhula kwesikhunta kunye nokugcina umsebenzi omkhulu kwizisombululo ezingxenge kakhulu. . Ezinye izinto ze-amine oxides zibonisa iipropathi eziphezulu ze-bactericidal, kwaye zisetyenziswa kwiisepha njenge-bactericidal deodorants, kwaye kwane-iodine equlathe i-bactericides yenzelwe ukonyusa ukunyibilika kunye nozinzo lwe-iodine, kwaye idlale indima kwinzalo nakwintsebenziswano. Phakathi kwazo, ifuthe le-dodecyl dimethyl amine oxide ekuthinteleni ukukhula kwe-Staphylococcus aureus ilingana naleyo ye-cationic surfactant ehambelanayo, ngelixa isiphumo sokuvalwa kwezinye i-amine oxides sisezantsi.
I-Amine oxide ine-hygroscopicity ephezulu kunye notyekelo lwe-ionization, kwaye inokwenza ifilimu eqhubayo eqhubekekayo kumphezulu wefayibha okanye i-resin, ke ineempawu ezintle ze-antistatic. Xa kuthelekiswa nezinye arhente antistatic, inkalo yayo inkulu utshintsho ukufuma kokusingqongileyo, Isiphumo antistatic has utshintsho oluncinci, kwaye ibonisa intsebenzo antistatic elungileyo nkqu phantsi ukufuma asezantsi. I-Amine oxide ikwanokuzinza okuthile kobushushu kunye nokuthambisa okuhle, inokudibana nezinto zokuthambisa eziqhelekileyo, i-emulsifiers kunye nezinye ii-antistatic agents, kwaye kulula ukuyisebenzisa.
I-Amine oxide ayikwazi ukubakho kuphela kwisisombululo se-hypochlorite iyodwa, kodwa ikwanceda amanye ama-surfactants ukuzinzisa i-hypochlorite, ngenxa yoko isetyenziswa kakhulu kwi-sterilization kunye ne-disinfection detergents.
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. iveliso ezifakiwe - Imephu yendawo